यसपटक बुटवलमा एमालेको किल्ला भत्किन्छः मेयर उम्मेदवार खेलराज पाण्डे – Everest Dainik – News from Nepal
यसपटक बुटवलमा एमालेको किल्ला भत्किन्छः मेयर उम्मेदवार खेलराज पाण्डे
रुपन्देहीको बुटवल, नेपालको राजनीतिमा उल्लेख्य प्रभाव पार्ने क्षेत्र । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि नयाँ सीमांकनले एमालेभित्र ठूलो खैलाबैला मच्चियो । कतिपयले यसलाई राजनीतिक भविष्यसँग समेत जोडे, आन्दोलन भयो, तर बिस्तारै सेलायो पनि । अहिले बुटवल फेरी तातेको छ, स्थानीय तहमा माओवादी र कांग्रेसबीच तालमेल भएपछि एमालेभित्र अर्को पहिरो गएको स्थानीय बताउँछन् । एमालेको ‘किल्ला’ मानिने बुटवल उप महानगरपालिकामा कांग्रेस÷माओवादी तालमेलले चुनावी परिणाममा कस्तो असर पार्छ ? भत्किन्छन् त एमालेको किल्ला ? के भन्छन् मेयरका उम्मेदवार खेलराज पाण्डेय ? एभरेष्टदैनिकडटकमका लागि रघुनाथ बजगाँईले लिएको अन्तर्वार्ताः
नेकपा एमालेको गढ भनिने बुटवलमा उम्मेदवारी दिनुभयो, कस्तो छ चुनावी माहौल ?
राजनीतिकरुपमा मेरो जीवन यहीँ बित्यो । बुटवलवासी, रुपन्देहीबासी, छिमेकी जिल्लाहरुका लागि म सधैं सक्रिय रहँदै आए । यसले गर्दा पार्टीभित्र मेरो लोकप्रियता थियो । मेरो उम्मेदवारीमा पार्टीभित्र कुनै प्रकारको बिबाद रहेन । जनताका हरेक सरोकारमा चासो राख्दै आएकाले पनि होला म अहिले कांग्रेसको मात्रै नभएर सबैको साझा उम्मेदवारको रुपमा स्थापित भएको छु । अर्को कुरा, स्थानीय तहमा राजनीतिक आस्थासँगै व्यक्तिको सक्रियता, इमान्दारिता र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधलाई समेत हेरिने गर्दछ । यो सबै हेर्दा आम जनतामा यसपटक कांग्रेसलाई नै जिताउनुपर्छ भन्ने परेको देखिन्छ ।
तर एमालेको किल्ला भन्छन्, राम्रो भनेर मात्र भएन भोट पाउनुपर्यो नि जित्नलाई !
किल्ला नै त नभनौं, तर विगतमा जनताले एमालेलाई अलि बढि नै अवसर दिएका हुन् । बुटवल मात्रै नभएर लुम्बिनी अञ्चलका अन्य जिल्लामा पनि एमालेले अवसर पाएको हो । तर उसले अवसरलाई समृद्धिमा बदल्न सकेन । बुटवल नगरको समग्र विकास गर्न सकेन । यहाँको समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो ।
त्यसैले आम जनताले नै प्रश्न गरेका छन्– जनताको आर्थिक हैसियत बढाउने गरि के–कस्ता काम भए ? यहाँको सुकुम्बासी समस्या, तिनाउ नदी पीडितका अपेक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रको सुधारमा कसले कस्तो भूमिका खेल्यो भन्ने जनताले बुझेका छन् । एमालेले त्यो अवसरको सदुपयोग गरेर जनताका पक्षमा काम गरेको भए अहिले हामीलाई नै उम्मेदवारी दिन गार्हो पथ्र्यो होला । तर त्यसो भएन । एमालेले पटकपटक अवसर पाउँदा पनि आम जनता, समग्र बुटवलको बृहत्तर विकासका लागि खासै काम गर्न सकेन । यो मेरो आरोप होइन, बुटवलका जनताले नै यसको अनुभूति गरेका छन् । त्यसैले यो किल्ला भनिएको कुरा सधैं टिक्दैन । जनताले यतिका अवसर दिँदा पनि काम गरेनन भने अब चाहिँ गर्छन् भन्ने के विश्वास भनिरहेका छन् । अरु क्षेत्रहरुले छोटो समयमा कति विकास गरिसके, हामी ऐतिहासिक सहर भएर पनि कछुवाको गतिमा छौं । त्यसैले बुटवल महानगरलाई एउटा बलियो व्यापारिक, पर्यटकीय, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रका रुपमा तीब्र गतिमा विकास गर्न एमालेको यो भ्रम भत्काउनु जरुरी देखेर हामीले माओवादी केन्द्रसंग पनि तालमेल गर्यौँ । यो सबै माहोलले हाम्रो गठबन्धनको जीत सुनिश्चित गरिदियो ।
तपाँईलाई भोट नै दिनुपर्ने किन ?
तीन चार वटा आधार छन् । केही त मैले माथि नै भनिसकेँ । मेरो सबैभन्दा पहिलो काम सुकुम्बासीको समस्या समाधान हो । लामो समयदेखि सार्वजनिक जग्गामा बसिरहेकाहरुलाई बस्ती स्थान्तरण गर्ने वा लालपुर्जा दिएर हुने ठाउँमा त्यो गर्छु । तिनाउ नदीमा तटबन्ध बनाउँछु र यहि बर्षायाममा जनताले सास्ती भोग्नुपर्ने छैन् ।
तेश्रो कुर, बुटवल ऐतिहासिकरुपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै ठूलो केन्द्र हो । आर्थिक, शैक्षिक या सबै किसिमको केन्द्र । तर यो व्यवस्थित हुन सकेन । बटौलीको भूमिका ऐतिहासिक छ यो क्षेत्रका लागि । हामीसँग यसलाई देशको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना छ । धेरै सम्भावना भएर पनि आर्थिक समृद्धिका कुरा मात्रै भए । ठोसरुपमा काम हुन सकेनन् । अब योजनाबद्ध रुपमा काम गरेर आउँदो ५ बर्षभित्र आर्थिक रुपमा समृद्ध शहर बनाउने योजना छ ।
यसका साथै यस क्षेत्रमा प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतको पनि केन्द्र बनाइने छ । स्थानीय जनताका अन्य रोजगारी, जीविकोपार्जन, स्वास्थ्यसँग जोडिएका विषयमा नमूना काम गर्ने योजना छ । योजना बनाएर काम अघि बढाए हामीलाई आर्थिक समस्या पनि पर्दैन ।
यो सबै काम म एक्लैले गर्छु भन्ने होइन । तर नेतृत्व मुख्य हो । मैले सबैलाई समेट्न सक्ने र सबैसंग राम्रो सम्वन्ध स्थापित गराउन सफल भएको छु । विगतका कामको समिक्षा गरेर प्रतिस्प्रधी दलका सर्मथकहरुले पनि यसपटक मलाई नै दिनुपर्छ भनेको सुन्छु । माओवादी केन्द्र पनि मलाई जिताउन लागि परेको छ ।
भनेपछि माओवादी केन्द्रको साथले जित्ने आधार तय गर्यो ?
माओवादी केन्द्रसंग हामीले तालमेल गरेर साझा उम्मेदवार उठाएका छौँ । यो दुबै पार्टी र जनताको पनि जित्ने आधार हो । माओवादी केन्द्रको साथले मेरो जितलाई सुनिश्चित नै गरेको जस्तो लाग्छ ।
जहाँसम्म कति भोटले जित्ने भन्ने छ, यसमा हाम्रा भोट काट्न अन्य प्रतिष्प्रर्धी दलले भरपुर प्रयास गर्छन नै । विगतमा मैले गरेका सकारात्मक कामको सन्देश जनतामा छ । तर बिभिन्न कारणले चुनावमा अर्थ राख्छ । यहाँ जम्मा ६६ हजार ८ सय ४३ मतदाता छन् । पार्टीगत रुपमा हाम्रा कति छन् भनेर आंकलन गर्दा मैले ३ हजार भोट अन्तर जित्छु ।
ट्याग्स: butawal, khelraj pande, raghunath bajagain